धूमपान गर्नुहुन्छ ? आजैदेखि छोडिहाल्नुहोस् ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
धूमपान गर्नुहुन्छ ? आजैदेखि छोडिहाल्नुहोस् !
एजेन्सी । एक नर्सले धूमपानले हाम्रो शरीरमा पार्ने प्रभावबारे एउटा रोचक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । अमान्डा एलर नामकी ती नर्स अमेरिकाको उत्तरी क्यारोलिनाकी हुन् । उनले धूमपान गर्नेको फोक्सो र नगर्नेको फोक्सोबारे सचित्र खुलासा गरेकी छिन् ।
उनका अनुसार धूमपानले विस्तारै शरीरमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसमा हुने निकोटिन र कार्बन मोनोअक्साइडले फोक्सो र मुटुमा असर गर्छ । धूमपान गर्दा यसले शरीरको छालामा पुग्नुपर्ने पर्याप्त अक्सिजनको मात्रामा कमी गराउँछ भने कार्बन मोनोअक्साइड र अन्य चार हजार केमिकलले स्वास्थ्यमा क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ ।
हरेक वर्ष लाखौँ मानिसहरु धूमपानको कारण मर्ने गर्दछन् । विशेष त यो नै क्यान्सरको प्रमुख कारण हो । यसले क्यान्सरबाहे अन्य ५० वटा गम्भीर स्वास्थ्य खतरा समेत पैदा गर्दछ ।
यदि धूमपान तपाईं छोड्नुहुन्छ भने यसले तुरुन्तैदेखि हामीलाई फाइदा गर्न सुरु गर्छ । मानिसले यदि धूमपान रोक्छ भने यसले शरीरमा पुनः सुधार ल्याउँछ ।
कहाँ कहाँ कस्तो असर पर्छ ?
धूमपानले रगतलाई बाक्लो बनाउँछ भने रगतलाई जमाउने सम्भावना पनि बढी बनाउँछ । यसले तपाईंको नशा साँघुरिँदै जान्छ र यही नै हृदयाघातको कारण समेत बन्ने गर्छ । कार्बन मोनोअक्साइड र निकोटिनले मुटुमा स्ट्रोक हुने र मुटुलाई नै राम्ररी काम गर्न नदिने गराउँछ । अन्य धूमपानसँग सम्बन्धित केमिकलले यसमा सघाउ पुर्याउने काम गर्छ । हृदयाघात हुने सम्भावना धूमपान गर्नेमा दोब्बरमात्रामा हुन्छ । धूमपानले छाला फिक्का पहेँलो, खैरो मिश्रित बनाउँछ र गाला पनि खोक्रो बनाउँदै लैजान्छ ।
जब तपाईं धूमपान गरिराख्नुहुन्छ यसले तपाईंको हाड कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । अझ यस्तो समस्या त महिलाहरुका लागि सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो । यसले हड्डीहरु मक्किने, चाँडै भाँच्चिने जस्तो समस्या ल्याउन सक्छ । कोही गर्भिणी महिला धूमपान गर्छिन् भने उनको बच्चा समय पुग्नुअघि नै खेर जाने सम्भावना हुन्छ भने चाँडै बच्चा जन्मिने खतरा पनि हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यस्ता महिलाले जन्माएको शिशु मर्ने खतरा पनि बढी हुन्छ ।
धूमपानले लागूऔषध हिरोइनले जत्तिकै लत बसाल्न सक्छ । यसले मस्तिष्कमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । यसले स्ट्रोक हुने र त्यसले मस्तिष्काघात (ब्रेन ड्यामेज) हुँदै मृत्युकै मुखमा पुर्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । फोक्सो क्यान्सर हुनेमध्ये ८४ प्रतिशत मानिसको मृत्यु धूमपानकै कारण हुन्छ । त्यतिमात्र नभई धूमपानले रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या, दमजस्ता रोग निम्त्याउने प्रबल सम्भावना हुन्छ भने गर्भिणी महिलाले गरेको धूमपानले शिशुलाई निमोनिया हुने डर हुन्छ ।
धूमपान गर्नेको लिंगमा समेत समस्या हुनसक्छ । लिंगसम्म जाने रक्तसञ्चारमा धूमपानले समस्या दिन सक्छ । त्यतिमात्र नभई यसले पुरुषहरुको वीर्य दूषित पार्नेदेखि यसको मात्रामा समेत कमी ल्याउनसक्छ ।
त्यस्तै धूमपानले पेटमा समस्या ल्याउनेदेखि मसलले गर्ने अन्ननलीमाथिको नियन्त्रण गुमाउने सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने एसिडहरु तल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ जसलाई रिफ्लक्स भनिन्छ । यसले पेटको क्यान्सर समेत हुने डर हुन्छ ।
त्यसकारण धूमपान नगर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो । गर्ने बानी नै छ भने पनि आजैदेखि छोडेको राम्रो । नभए उक्त समस्याको शिकार हुने र त्यसले मृत्युको मुखमा पुर्याउने निश्चित छ ।